Sharciyada cusub ee dhaqan galay sannadkan 2015 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
I den här boken står Sveriges lagar. På boken ligger en klubba av trä. Den kan domaren knacka i bordet när domstolen tar sitt beslut. Foto: TT.
Sharciyada cusub ee dhaqan galay sannadkan 2015
La daabacay fredag 2 januari 2015 kl 16.06
Laga bilaabo maalintii shalay oo khamiis ahayd, bishuna ahayd 1-da Janaayo, ayaa waddankan waxaa ka dhaqan galay sharciyo badan. Kuwaas oo ay ka mid yihiin in si fudud dacwad loogu soo oogi karo qofka qof ka caaya aalada internetka. Sidoo kale waxaa dhaqan galay sharci cusub oo khuseeya bukaanka, sharcigan oo u fududaynaya qofka bukaanka ah in uu go’aan ku yeesho daryeelka la siinayo ee uu u baahan yahay
-Waxay adkaynaysa nidaamka oo dhan. Haddii daaweynta cudurka macaanka ama sonkorta ee maamulka caafimaad ee gobol uu aad u liito, oo qof macaan qaba ee halkaa ku nooli uu daryeel caafimaad u raadsado gobol kale, middaasi waxay digniin u tahay maamulka caafimaad ee gobolkaas oo ay tahay in ay kor u qaadaan tayada caafimaad ee guud, sidaa waxaa telefeeshinka qaranka Sweden u sheegay, Johan Assarsson oo ah baadhe sharcigan u qaabilsanaa dawladii ay xulafada ku ahaayeen xisbiyada garabka midig.
Sharcigan cusub ee bukaanka ayaa ka kooban saddex qaybood oo fursad u sinaya bukaanku in uu go’aan ku yeesho xaaladiisa daryeel. Kuwaas oo kala ah in qofka bukaanka ahi uu gobolka uu doono daryeel caafimaad u raadsan karo. In qofku xaq u leeyahay in uu ogaada xanuunka haya waxa uu yahay iyo in qofka bukaanka ah ee la il daran xanuun halis ah uu xaq u leeyahay in maro dhakhtar labaad si loo hubiyo habka ugu wanaagsan ee qofkani ku heli karo daryeel ku haboon.
Geesta kale, ka dib markii badatay cayda iyo dagaalka afka ah ee la isu mariyo internet-ka ayaa hadda wax laga bedelay sharciga asaasiga ah, sii loo fududeeyo in dacwad lagu soo oogi karo qofka qof kale ka caaya aalada internetka.
Hore ayaa qofka aflagaado loogu geysto, boggaga internetka ama baraha bulshadu ku kulanto uu isagu iskii dacwad arrinka la xidhiidha u oogi jiray, maddama oo in xeer ilaaliye uu dacwad soo ooga ay u baahantahay sababo khaas ah, ayna adag tahay in uu xeer ilaaliye soo oogo dacwad noocaas ah.
Imika ayaa la laalay asbaabaha khaas ah ee xeer ilaaliyaha ka hortaagna in uu dacwad kasta soo oogo. Hadda ayaana dad badan ay dacwado arrimaha la xidhiidha soo oogi karaan iyaga oo kaalmo ka helaya xeer ilaaliyaha, wax kharash ahina aanu ka baxayn.
Wasiirkii hore ee cadaalada Beatrice Ask ayaa wakaalada wararka ee Raadiyaha Sweden Ekot, u sheegtay in middani ay tahay isbedel wanaagsan.
-Waxaanu qabnaa in ay middani dadka u fududaynayso in ay kala saaraan aflagaadada iyo bahdilka. Hanjabaada interntetka iyo waxyaabaha la mid ah ee aan la aqbali karin. Ayay leedahay Beatrice Ask
Sidoo kale, laga bilaabo shalay oo taariikhdu ay ahayd 1-Janaayo sannada 2015 ayaa macaamiisha tagsiyada waxaa loo ogolaadau in ay ogaan karaan qiimaha tagsiga ee meesha uu qofku socdo, intaan safarku bilaabmin.
Shirkadaha tagaasida ee qaata lacag ka badan 500 oo koroon masaafada halka mayl, ayaa waxaa sharci lagaga dhigay in ay macaamiishooda ogaysiiyaan qiimaha ugu sareeya ee safarkaasi noqon karo, sidoo kalena in aan qiimaha safarku ka badan qiimaha ay ku heshiiyeen darawalka iyo rakaabku.
Ujeedada sharcigan ayaa ah, in dadka macaamiisha ah aan lagu soo dalicin qiime aanay filayn, sida ay Ekot u sheegtay wasiiradii hore ee baahiyaha asaasiga ah Cathrina Elmsäter-Svärd.
Waxaanu aaminsanahay in ay tani tahay hab aan laysku khiyaamayn karayn qiimaha. Iyo in qofka la siiyo fursad doorasho inta aanu raacin tagsiga.
Sharciyada kale ee muhiimka ah ee wax laga bedelay waxaa ka mid ah, sharciga muwaadinka iyo sharciga ajaaniibta. Laga bilaabo maalintii shalay oo sannadkan 2015 uu kow ahaa.
Wax ka bedelka lagu sameeyay sharciga ajnebiga ayaa waalidiinta caruurtoodu u baahantahay magangelyada, iyagana u ogolaanaya in la siiyo sharci deggenaansho. Sharciga ayaa shaqayn doona laga bilaabo sannadka soo socda ee 2015.
Wax ka bedelkan ayaa odhanaya waalidka dhalay ilmo aan xaas ahayn oo u baahan gabbaad ama badbaado, laga bilaabo sannadka soo socda bilawgiisa wuxuu xaq u yeelanaya in la siiyo deggenaanshaha rasmiga ee waddankan Sweden.
Sharcigan ayaa shaqaynaya uun marka waalidka iyo ilmuhu ay isku mar dalbadaan codsigooda magangelyo.
Ugu dambayna sharciga muwaadinka oo wax laga bedelay ayaa dadkii loo diiday dhalashada Sweden sababo la xidhiidha in ay haystaan dhalasho kale, ay hadda mar labaad dalban karaan dhalashada Sweden. Iyaga oo codsi u diraya Laanta Socdaalka.
Middan waxaa sababay wax ka bedel lagu sameeyay sharciga muwaadinka oo dhaqan gelayaa 1-da bisha janaayo ee sannada 2015.
Sharcigan ayaa sidoo kale, maamulada degmooyinka Sweden khasab kaga dhigayaa in ay abaabulaan xaflado dhalashada Sweden lagu gudoonsiiyo muwaadiniinta cusub. Sidoo kale sharciga ayaa odhanaya ilmaha uu dhalay aabe ama hooyo swedish ahi, wuxuu si toos ah u qaadanaya dhalashada Sweden.